Nbudata ngwugwu UKMIL Harrier FSX & P3D - Rikoooo
Lee Harrier GR5 / 7 na T10 maka FSX or P3D. Chere na vetikal ọdịda. Gụnyere ọtụtụ textures na ụdị, gụnyere ụda omenala na VC zuru ezu. Gụnyere ihe osise 3D zuru ezu.
a add-on enwere onweghi ego, mana e guzobela iji kwado HELP FOR HEROES (H4H) ndị ọrụ enyemaka Britain ebuputere na 1 Ọktoba 2007 iji nyere ndị ọrụ na ụmụ nwanyị Britain ndị merụrụ ahụ aka na Septemba 11, 2001.
The British Aerospace / McDonnell Douglas Harrier II bụ a abụọ-emana vetikal / obere takeoff na ọdịda (V / STOL) ugboelu ugbo elu jiri mbụ site Royal Air Force (RAF) na, n'etiti 2006 na 2010, ndị Royal n'Òtù Ndị Agha Mmiri (RN). Na ụgbọ elu e ewepụtara McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, nke onwe ya bụ a mmepe nke Hawker Siddeley Harrier. Mbụ deliveries nke Harrier II e ẹkedọhọde na ọrụ dị ka Harrier GR5; ekemende kwalite airframes e redesignated ya dị ka GR7 na GR9.
Ma ndị RAF na RN ejikwara na Harrier II dị ka a n'ala agha n'elu ikpo okwu; na Harrier II bụkwa ike nke na a na-ejikwara si anwụ anwụ klas ugbo elu na-ebu. The Harrier II ama ọgụ ọzọ ke Kosovo, Iraq, na Afghanistan. Na December 2010, mkpata na mmefu nrụgide nke mere ka a lara ezumike nká n'oge niile Harrier IIS si ọrụ. The mkpebi na ịla ezumike nká bụ controversial dị ka e nweghị ozugbo ofu-nku nnọchi na ya ọrụ; ke ogologo okwu ndị Harrier II a ga-dochie anya Lockheed Martin F-35 Lightning II. (Wikipedia)